Ibsaa Jireenyaa - Page 2 of 80 - In sha Allah Ilma namaa daandii qajeelumma,gammachuu fi milkaa'innaa itti akeekudha.
February 13, 2022 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti Ya’quub (aleyh salaam) dhaamsa gaarii isaaniif dhaamun Biniyaamin obboleeyyan waliin akka erge ilaalle jirra. Kutaa kana keessatti immoo Biniyaamin Misirin erga gahee booda wanta adeemsifame ilaalla:
February 3, 2022 Sammubani Leave a comment
Obboleeyyan Yuusuf bara dheeraa booda sababa hoongetiin gara Misir akka dhufan kutaa darbe keessatti ilaalle jirra. Isaan Yuusufin haa wallaalanii malee inni yoosu isaan beekuun haala gaariin isaan keessumeesse. Yommuu gara biyaatti deebi’an midhaan isaaniif safaruu waliin maallaqa daldalaa isaaniif deebise. Garuu lammata yommuu deebi’an obboleessa isaanii xiqqaa yoo hin fidin midhaan akka hin arganne isaan akeekachiisee. Obboleeyyanis yommuu gara manaa deebi’an akeekachiisa kana haala armaan gadiitiin abbaa isaaniitti himan:
January 23, 2022 Sammubani Leave a comment
Obboleeyyan Yuusuf Dhufuu
Bara dheeraa dura obboleeyyan Yuusufin eelatti darbuun abbaa isaa irraa fageessan kunoo rakkoon isaan dirqisiisuun gara Yuusufi dhufan. Kunoo Yuusuf osoo barbaade carraa isaan irraa gadoo baafachu argatee jira. Garuu inni muhsiiniin (warra tola oolanii fi hojii bareechisan) keessaa tokko waan ta’eef gadoo baafachuuf hin carraaqne. Kana irra, nama hunda caalaa isaan keessumeesse. Kuni gaarummaa akkami! Nama qileetti si darbe baroota dheeraa booda yommuu sitti dhufu maaltu sitti dhagahamaa? AllahuAkbar! Rabbiin amala Yuusufin badhaase kana nullee haa badhaasu. Aamiin Allaahummaa aamiin. Mee gara seenaa ajaa’iba kanatti haa dabarru:
December 26, 2021 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti mootichi Miisir abjuu ajaa’iba arguun hiika isaa beekuf namoota gurguddoo akka walitti qabe ilaalle jirra. Namoonni kunniin yommuu abjuu kana hiiku dadhaban namtichi duraan Yuusufin waliin mana hidhaa ture nama sirnaan abjuu hiiku ni yaadate. Kanaafu, gara Yuusuf na erga jedhe. Innis gara Yuusuf deemuun hiika abjuu gaafate. Innis hiiki sirrii furmaata waliin kenneef. Mootichi yommuu kana dhagahu, garmalee gammade. Yuusufi kana natti fidaa jedhe.
December 19, 2021 Sammubani Leave a comment
Mootii fi Abjuu
Yuusuf yakka tokko malee mana hidhaatti akka darbamee ni yaadatama. Namni yakka tokko malee hidhame, mana keessa zalaalami hin turu. Guyyaa tokko ima baha. Kunoo Yuusuf waggoota muraasaaf mana hidhaa keessa erga ture, yeroon bahiinsa isaa ni dhiyaate. Yeroon kunis yeroo mootiin biyya Misir bulchuu abjuu ajaa’ibaa arguudha:
December 15, 2021 Sammubani Leave a comment
Qajeelcha fi seenaa Nabiyyii (SAW) barachuun Muslimoota hundaaf dhimma garmalee barbaachisaa ta’eedha. Kaayyoolee baay’ee galmaan gaha. Isaan keessaa ijoon: Eenyummaa Ergamaa Rabbii (SAW), hojiiwwan isaa, dubbiiwwan isaa fi wantoota inni mirkaneesse beekun isatti hidhachuu fi fakkeenya godhachuu, Muslimni akka nabiyyii (SAW) jaallatu taasisu. Nuti yeroo Nabiyyiin Qureeshotatti da’awaa godhuu fi isaaniitti qabsaa’u bira hin jirru. Kanaafuu, akkamitti osoo isa hin beekin isa jaallachuu fi hordofuu dandeenyaa? Kanaafuu, karaan tokkichi nabiyyi (SAW) itti jaallatanii fi hordofan seenaa isaa (siiraa) barachuudha. Seenaa Nabiyyii barachuu fi qo’achuun Nabiyyiin abbaa manaa akkami, hogganaa akkamii, bulchaa akkamii, barsiisaa akkamii, abbaa murtii akkamii, daa’ii akkamii akka turan ni baranna. Haala fi eenyummaa keenya osoo adda hin baasin hundi keenyayyuu seenaa Nabiyyii qo’achuu fi qorachu irraa faaydaa guddaa arganna. Kitaabni kuni seenaa odeessu qofa osoo hin ta’in barnoota seenaa irraa argamu jalatti gabaabbinaan ni dhiyeessa. Kuni haala salphaan seenaa Ergamaa Rabbii (SAW) irraa barnoota akka fudhatanii fi hojitti akka jijjiraniif nama gargaara. Seenaa as keessatti dhiyaate nama guddaa qofaaf osoo hin ta’in nama hundaaf qajeelcha ta’a. Sababni isaas, umrii daa’imummaa, ijjoollummaa, dargaggummaa fi umrii san booda jiru keessatti wanta Rasuula (SAW) qunname fi adeemsa isaa waan himuuf, ijoolleef, dargaggootaa fi namoota biroo hundaaf barnootaa fi qajeelcha guddaa ta’a.
Kitaaba kana buusuf liinki armaan gadi tuqaa: https://sammubani.files.wordpress.com/2021/12/ilmaan-namaatiif-qajeelfama-seenaa-nabiyyii-kabajamaa.pdf
November 28, 2021 Sammubani Leave a comment
Gara Tawhiidaatti waamuu fi shirkii achi gatuu
Kutaa darbe keessatti Nabii Yuusuf (aleyh salaam) dargaggoota lamaan isa waliin mana hidhaa seenaniif abjuu isaanii hiikun duratti, gara tawhiidaatti isaan affeerun jalqabe. Tawhiinni karaa tokkicha namni ittiin milkaa’u danda’uudha. Mee affeeraa gara tawhiida Nabii Yuusuf dargaggootaaf taasise ilaalu itti haa fufnu:
November 7, 2021 Sammubani Leave a comment
Jireenya Mijaa’innaa irraa gara Mana Hidhaatti
Jiruun tuni qormaataa fi bu’aa bayi baay’een tan guuttamteedha. Yeroo hundaa rakkoon homaatu osoo na hin qunnamiin mijaa’inna keessa nan tura jedhanii yaaduun gowwummaadha. Addunyaan iddoo qormaataa waan taateef yeroo garii mijaa’inna keessa, yeroo biraa immoo rakkoo keessa taana. Kunoo jireenyi nabii Yuusuf aleyh salaam fakkeenya guddaa nuuf taati. Yuusuf koolu abbaa isaa keessatti kunuunfama ture. Ergasii yeroo muraasan booda qananii kana keessa butamuun gara eelaatti darbame. Ammas yeroo muraasan booda eela keessaa baafamuun biyya misir keessatti masar mootummaa keessatti jireenya isaa itti fufe. Hanga yeroo murtaa’e mijaa’inna fi toltu keessa jiraate. Garuu qormaata cimaan ni qorame. Kunoo amma sobaan yakkamuun jireenya mijaa’inna keessaa bahuun gara mana hidhaa dhiphootti deemuf jira. Argitanii bu’aa bayii fi qormaata jireenyaa? Kaleessa mijaa’innaa keessa jiraachu dandeenya. Har’a mana hidhaatti darbamuu, reebamuu fi rakkooleen adda addaa nurra gahuu danda’u. Kanaafu, jireenya Yuusuf fakkeenya godhachuun obsuuf qophiidhaa?